निपाह भाइरस : १ सय १८ अस्पताललाई तयारी अवस्थामा बस्न मन्त्रालयको निर्देशन « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
निपाह भाइरस : १ सय १८ अस्पताललाई तयारी अवस्थामा बस्न मन्त्रालयको निर्देशन
३० भाद्र २०७८, बुधबार १४:५०
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका १ सय १८ अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निपाह भाइरसको परीक्षणका लागि तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएको छ ।
भारतको केरलामा देखिएको निपाह भाइरस नेपालमा पनि फैलने जोखिम भएको भन्दै मन्त्रालयले परीक्षणको लागि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले चमेराबाट सर्ने यस रोग प्राणघातक रोग मानिसबाट मानिसमा पनि सर्ने जोखिम रहेकाले सबै सचेत हुनेपर्ने बताउनुभयो । शरीरको तरल पदार्थबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले सर्तकता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रगतबाट परीक्षण गरिने यस भाइरस परीक्षण गर्ने किट सबै तिर नभएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । भारतसँग सीमा जोडिएका कारण र संक्रमण फैलाउने चमेरा नेपालमा पनि पाइने भएकाले थप सचेत हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
पशुपंक्षीको सम्पर्ककमा धेरै रहने व्यक्तिहरू यसको जोखिमबाट जोगिन बढि सचेत हुनुपर्नेमा डा. पौडेलले जोड दिनुभयो । चराले टोकेका वा घाउ लागेका फलफूलहरू नखान र मासुजन्य पदार्थहरू राम्रोसँग पकाएर मात्र खान उहाँले सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नर्भिकले निःशुल्क ओपिडी सञ्चालन गर्ने
कान्ति बाल अस्पतालमा ‘सारिकादेवी चौधरी आकस्मिक कक्ष’ सञ्चालनमा
थप २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
थप ७ जनामा कोरोना संक्रमण
डोटीमा बस दुर्घटना हुँदा ७ जना घाइते